Amanzi aSula abaXhasi - Abavelisi beeVenkile eziManzi abaThengisa, iFektri
Umzi mveliso weebhokisi zeebhokisi zeenqwelomoya ezili-100 zokucoca ukusulwa kwebhakteria yezinja kunye neekati
Gcina isilwanyana sakho sicocekile kwaye sinuka rhoqo imihla ngemihla.
Ifomula ethambileyo yolusu lwakho lwesilwanyana.
Ukuthambisa ulusu olomileyo nolurhawuzayo.
Ngokukhuselekileyo ususa i-dander kunye nephunga elinzima lesilwanyana.
Inceda ukuphazamisa iinwele.
Natural hypoallergenic ekhuselekileyo enobuhlobo engama-200 kubalwa ukusula izilwanyana ezimanzi kwizinja neekati
Ngokweklinikhi kungqinwe ukuba kukhuselekile kwiinjana, i-hyoallergenic, ukungomisi kunye nokungacaphukisi; ezi zisuli zithambile ngokwaneleyo kulusu olubuthathaka. Ukusula izilwanyana kwenziwa ngelaphu elomeleleyo elingazukuphuka kuwe, nokuba ucoca izinja neekati zakho.
Ngokosiko olususwayo kwintsholongwane olusula iintsholongwane kulomzi Akukho livumba limnandi
Ifomula yendalo, akukho ziqholo zongeziweyo, zisempilweni kosana. Spunlace ilaphu elingalukanga, ethambileyo kunye nolusu-oluhle, ukhathalelo lolusu lomntwana wakho. Ukusula izandla zomntwana nomlomo kukhuselekile kwaye kunobuhlobo, okwenza ukuba umntwana abe sempilweni kwaye abe nococeko.
Ukusula okumanzi kuqukethe i-vitamin E kunye no-C yokongeza izondlo ebusweni
Ukusula izithambisi zendalo, i-hydration ethambileyo, inokusetyenziselwa ulusu olubuthathaka. Lo msusi wokususa izithambisi angasusa ngokulula yonke into kwaye acoce ubuso bonke.
Ifektri ye-OEM Hlamba iDashboard yangaphakathi yoKhathalelo oluZenzekelayo loMgqomo ococekileyo osula amanzi
I-antibacterial evuselela i-vinyl yangaphakathi, irabha kunye neplastiki.
Ingaphakathi leemoto kunye nelomqhubi likhusela i-ant wipes kunceda ekubuyiseni umbala wendalo wemoto yakho kunye nokukhanya. Ziyakhusela ingaphakathi lemoto yakho ekutshabalaleni, ekuqhekekeni nasekuguqulweni kombala ngenxa ye-UV ngqo, i-ozone, ioksijini kunye nobushushu obugqithisileyo.
Umgangatho ophezulu wefektri ubala ama-80 ukwenza imisebenzi emininzi yokucoca umphezulu wokucoca ii-antibacterial wipes
Ukuxhasa ukupakishwa kwesiko, ukucaciswa kwesiko, iifomula zesiko, ukusula iintsholongwane kotywala. Ivenkile yamaxabiso aphakamileyo ngamaxabiso aphantsi. Umgangatho ophezulu wengubo engalukwanga.
I-brand eyenziwe ngokwezifiso i-160 isula kwi-canister nganye ye-75% yokusula utywala
Yenziwe ukuba ibe ngaphandle kwemichiza erhabaxa, kodwa inzima kwiintsholongwane! Gcina ukhuselekile ngokusula iintsholongwane kunye neebhaktiriya ezinokubangela izifo ezandleni ngexesha nasemva kokuba usevenkileni, iivenkile zokutyela, iiofisi, amagumbi okufundela, iindawo zokuzilolonga, iikhitshi, iindawo zokulala, ngexesha lokuhamba, kunye nokunye.
Ukusetyenziswa kwe-disinfection kunye nokusula kwe-antibacterial
Ukubulala iintsholongwane kukusula kungabulala i-99.9% yeebhaktheriya ngokufanelekileyo. Imvubelo yeti eluhlaza yendalo inefuthe elikhethekileyo ekulibaziseni ukuguga. Ayonzakalisi izandla okanye ulusu. Iphakheji encinci, kulula ukuyiphatha.
Ukucoca ngobumnene iibhatyi ezimanzi ezisulwayo ezinelaphu elikumgangatho ophezulu elingasokolwanga
Ukucoca ibhatyi phantsi kusula, akukho sidingo sokuhlamba, sula amabala ahlukeneyo, kwaye unogada wesandla akonakalisi iimpahla, kulula ukuziphatha, unokuthintela iintloni nanini na naphi na! Ayonakalisi izinto, ayishiyi i-watermark, kwaye kulula ukuyisebenzisa kwiphakheji encinci.
Ihowuliseyili ilamuni incasa yokubulala iintsholongwane ukhathalelo lobuqu wosula iintsholongwane ezimanzi
Ukusula i-antibacterial kungabulala ngokufanelekileyo i-99.9% yeebhaktheriya kwaye ikhusele ukhuseleko kunye nempilo yobomi. Ukucoca ngokukhawuleza nangokulula. Mahala amachiza arhabaxa.
Yamkela ukucocwa kweglasi ekucociweyo kweemoto
Isetyenziselwe ukosula umboniso wemoto, ukuhonjiswa kwemoto ngaphakathi, isipili esingasemva, isikrini sesixhobo sasekhaya, njl.
Yenza ngokucocekileyo ngokucocekileyo ihlambuluke izicathulo ezimhlophe kunye nezikhumba
Ukucoca, ukondla kunye nokuqaqambisa okusula izihlangu. Ama-40 osula amanzi ngekani nganye. Ubungakanani beewipe ezimanzi zi-16 * 16cm. Ilaphu elisongelwe kabini nelityebileyo elingalukwanga.